2020 ခုနှစ်အတွင်း InternPlus တွင် စိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့သော Content (10) ခု - Intern Plus
2020 ခုနှစ်အတွင်း InternPlus တွင် စိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့သော Content (10) ခု
Intern Plus Myanmar ရဲ့ content တွေထဲကနေပြီးတော့ 2020 မှာ ကျောင်းသားတွေ အဖတ်အများဆုံးနဲ့ စိတ်ဝင်စားအများဆုံး Content (10) ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော်။
(1) Self-Sabotaging နှင့် အားနာတတ်လွန်းခြင်း
Self-Sabotaging ဆိုတာ လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်တဲ့အခါမှ မဟုတ်ဘဲ Intern Pluser တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကိုယ်သတိပြုမိလိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မပြုမိသည်ဖြစ်စေ နေ့တိုင်း ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ။
Read more >> http://bit.ly/3aNlBI6
(2) Digital Marketing Career ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ Skill များ
အခုလက်ရှိမှာ Digital Marketing က အရမ်း Hot တဲ့ Topic တစ်ခု ဖြစ်နေတဲ့အပြင် New Normal မှာ Digital Skill တွေကလည်း အရမ်းကို အရေးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့် မဖြစ်မနေလေ့လာထားသင့်တဲ့ Skill တစ်ခုပါနော်။
Read more >> http://bit.ly/3pE7IAd
(3) Career နဲ့ပက်သတ်ပြီး consult လုပ်ဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်အမှန်တကယ်‌လျှောက်လှမ်းချင်တဲ့ Career ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီ Career ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လျှောက်လှမ်းတဲ့အခါ ကိုယ့်ထပ် လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာအရ Knowledge ရော၊ အတွေ့အကြုံရော ရင့်ကျက်တဲ့ Professional တွေဆီက Consultation အကြံဉာဏ်တွေကိုရယူပြီး Plan ချလုပ်ဆောင်တာက Career အတွက် အထောက်အကူအများကြီး ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
Read more >> http://bit.ly/3n0DXHS
(4) Advantages of Internship
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Internship Culture က ကျောင်းသားလူငယ်တွေကြားမှာ အတော်လေး ရေပန်းစားလာပါတယ်။ Internship(အလုပ်သင်ဆင်းခြင်း)ဆိုတာဟာ beginnerတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပက်သက်လို့ လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုမျိုး အတွေ့အကြုံ၊ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရလဲဆိုတာ ဒီ Content လေးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်နော်။
Read more >> http://bit.ly/2L2N2mv
(5) လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်မဖြစ် ဘယ်လိုဆန်းစစ်ကြည့်လို့ရလဲ?
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေဆိုတာ ကျောင်းပြီးသွားပြီး ဘွဲ့ရမှလုပ်လို့ရတယ်လို့ အများစုကထင်နေကြပါတယ်နော်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ content လေးက လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လို ဆန်းစစ်ကြည့်လို့ရလဲ? ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ မျှဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Read more >> http://bit.ly/3rHwuRU
(6) ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တိုးတက်ဖို့အတွက် အချက် (၄) ချက်
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခြင်းကနေရလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကများပါတယ်နော်။ ဒီ content လေးမှာတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ အားနည်းတဲ့ Intern Pluser တို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်နော်။
Read more >> http://bit.ly/3pCqAzg
(7) ကိုဗစ်ကာလ အပြီးလုပ်ငန်းခွင်ထဲအပြိုင်အဆိုင်ဝင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ?
အခုလက်ရှိမှာ covid ကမပြီးနေသေးပေမယ့် လုပ်ငန်းတော်တော်များများကတော့ New Normal နဲ့ အသားကျအောင်လုပ်ပြီး စတင်နေကြပါပြီ။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်ဖို့ Ready ဖြစ်နေပြီလား? ယုံကြည်မှု ဘယ်‌လောက်ရှိနေပြီလဲ? ဆိုတာ သုံးသပ်နိုင်မယ့် အချက်လေးတွေ ဖော်ပြပေးထားတာပါ။
Read more >> http://bit.ly/3pxvRbn
(8) 2021 အတွက် New Year Resolution တွေအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား?
၂၀၂၀ တစ်နှစ်လုံးကတော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြီးကြောင့် Intern Pluser တို့ရော Admin တို့ကိုရော အခက်အခဲတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်နော်။ အခက်အခဲတွေကြားထဲကနေပြီးတော့ သူများတွေ Year Plan အသစ်တွေ Resolution အသစ်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေချိန်မှာ နောက်ကျမကျန်ခဲ့ရအောင်လို့ New Year Resolution မှာ ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့ Content လေးပါ။
Read more >> http://bit.ly/37YtM2v
(9) Career Genie တစ်ယောက်သာရှိနေရင်ဘာတွေမေးမလဲ?
ဒီ Content လေးမှာတော့ ကိုယ်သာ Career Genie တစ်ယောက်ဆီက အကူအညီတွေသာရနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Career နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေမေးဖို့ပြင်ဆင်ထားမလဲ? ဘယ်လိုအကူအညီတွေတောင်းသင့်သလဲ? ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို မျှဝေပေးထားတာပါ။
Read more >> http://bit.ly/2X1iK61
(10) Job နဲ့ Career က ဘာကွာလဲ?
Job နဲ့ Career ဘာကွာခြားလဲဆိုတာက အမြဲတမ်း Conflict ဖြစ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဒီ Content လေးကို ဖတ်ပြီးသွားရင်တော့ ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာ သိသွားမှာပါ။
Read more >> http://bit.ly/2L9jd3m
Tags 2020InternPlusTop Content